Ekwentị kacha mma emere na 2018: Samsung, Huawei na ndị ọzọ | Gam akporosis
Afọ 2018 abịala na njedebe. Na ọbịbịa nke Ekeresimesi ekeresimesi, na ndị copious nri abalị, anyị maara na afọ ọhụrụ dị nso n'akụkụ. Na usọrọ anyị kwadebere a chịkọtara na nke kachasị mma nke egosiri na afọ a 2018.
Anyị na-ekwu maka ọnụ ọgụgụ dị elu nke nwere ihe ijuanya na nhazi ha, ngalaba foto, ngwaike dị ike ma ọ bụ site na nkọwa ọ bụla ọzọ nke mere mgbanwe, na-abanye n'elu nke a site na iji mobiles kachasị mma ewepụtara na afọ a 2018.
1 Mwekọta na mobiles kachasị mma nke egosiri na afọ a 2018
Mwekọta na mobiles kachasị mma nke egosiri na afọ a 2018
Otu n'ime mkpughe dị ukwuu e gosipụtara n'afọ a bụ Huawei P20 Pro. Anyị na-ekwu maka ọkọlọtọ nke onye nrụpụta Eshia ugbu a nke na-enye ngalaba foto nke hapụrụ anyị ka anyị mepee ọnụ. Nke ukwu ka anyi ghara igbu oge ime rnyocha nke Huawei P20 Pro na-eji igwefoto ya. Dị ka ị ga-ahụ, nsonaazụ rụpụtara adịla mma karịa nke ọma.
A ghaghi itinye ihe a mara mma nke oma, ya na n'azụ igwefoto mejupụtara atọ anya m nke ahụ na-eme ka ọdịiche dị na nke ahụ jikwa too Huawei P20 Pro dị ka otu n'ime ezigbo ngwọta na ahịa. Ma ọ bụrụ na anyị gbakwunye na nke a na anyị nwere ike ịzụta anụ ọhịa nke onye nrụpụta China maka euro 600, anyị nwere ọnụahịa zuru oke iji chebara ya echiche.
The Galaxy S ezinụlọ nwere ike na-efu efu anyị top na nke kacha mma ntị adade ke 2018. Na, ọ bụ ezie na Samsung Galaxy S9 Plus O nweghi ihe ohuru ma e jiri ya tụnyere ọgbọ gara aga mana ọ hapụrụ anyị nnukwu mmetụta mgbe anyị nwere ohere ịnwale ya na MWC 2018.
N’ịtụle ọmarịcha atụmatụ ya, igwefoto dị ike, sọftụwia dị elu, yana eziokwu ahụ na anyị nwere ike nweta ugogbe ihu igwe OLED site na iji ugogbe anya maka anwụ. emepụta eziokwu Iji nwee obi ụtọ ọdịnaya na teknụzụ a, ha na-eme Samsung Galaxy S9 Plus ga-adị n’elu anyị.
Zụta Samsung Galaxy S9 Plus - 6.2 Smartphone
Ewebata ọnwa ole na ole gara aga, ndị Xiaomi Mi Mix 3 nwere bụ ihe mkpughe ọzọ dị ukwuu nke afọ a. Ọkọlọtọ dị ugbu a nke ezinụlọ Mix nke onye nrụpụta Eshia kwụpụtara maka ịnwe igwefoto nwere ike iwepụ nke na-enye ya ohere izere ọkwa na-akpasu iwe na ihuenyo ahụ.
A ghaghị itinye nke a ụfọdụ nkọwa ndị na-eto ya na mpaghara kachasị elu na mpaghara ahụ na ọnụahịa nkwụsị nke na-eme Xiaomi Mi Mix 3 otu n'ime igwe kachasị mma nke afọ a 2018.
Ndị otu OnePlus tụrụ anyị n'anya site n'ụdị vitaminized nke ọkọlọtọ ya ugbu a. Anyị na-ekwu maka ya OnePlus 6T McLaren Edition, ngwaọrụ nke nwere atụmatụ nke na-ebuli ya elu na mpaghara ahụ na usoro nkọwa nke na-eme ka ọdịiche dị.
Anyị na-ekwu maka nhazi ya, yana ahụ ejiri eriri carbon, dị ka ụgbọ ala nke onye nrụpụta ama ama McLaren, nkọwa dịka akara ncheta ma ọ bụ akwụkwọ mmekọrịta nke ejiri ekwentị a na anyị nwere ike ịzụta ihe na-erughị euro 700. You chọrọ ụdị nke a? Anyị na-ahapụrụ gị njikọ iji nweta ya OnePlus 6T maka ihe na-erughị euro 600.
Zụta OnePlus 6T - Smartphone 8GB + 128GB, agba ojii (etiti abalị ojii)
Anyị enweghị ike ịhapụ ohere iji tinye Huawei Mate 20 Pro na nke a na mobiles kacha mma nke 2018. Anyị na-ekwu maka phablet ọhụrụ nke ndị na-emepụta Asia nke nwere ngalaba foto ka mma karịa nke Huawei P20 Pro.
Mgbe anyị nwere ohere ime nyochaa Huawei Mate 20 Pro, ihe mmetụta ahụ dị ezigbo mma ma, na-atụle mbelata ya na Amazon, ọ dị anyị ka otu n'ime ezigbo ngwọta na ahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ndị a bụ 5 ekwentị mkpanaaka kachasị mma na 2018
Ihe ntanetị Windows 10 kacha mma maka mbadamba gam akporo